Chainalysis - ụlọ ọrụ na-ebibi ndị anonymity Bitcoin - Blockchain News
Chainalysis – ụlọ ọrụ na-ebibi ndị anonymity Bitcoin
Ọtụtụ mba ndị mepere emepe, ifịk ọrụ bụ n'okpuru ụzọ ịme iwu maka ụkpụrụ nke cryptocurrencies na igbochi. Na drafting nke ego, ha na-emekarị nyere aka site ụlọ ọrụ nyochaa mgbochi netwọk, otu n'ime ndị kasị ama – Chainalysis. naanị na 2017 ụlọ ọrụ akwụ banyere $ 700,000, na-ekwenyere ndị ikwu na ndị mmanye iwu na ndị ụlọ ọrụ.
Chainalysis e hiwere na 2014 site Jano Moller, Jonathan Levin na Michael Gronager. Isi ntụziaka nke ụlọ ọrụ ahụ na-nlekota blockages na cryptocurrency azụmahịa maka Iguzogide ego Laundering na igwu wayo. Ụlọ ọrụ ndị na-enye yiri ọrụ ọtụtụ, ma fọrọ nke nta niile US ngalaba, nakwa dị ka European òtù dị ka Europol, emetụta Chainalysis.
N'afọ gara Chainalysis natara karịa $ 700,000 si US Ngalaba n'ala nna Nche (DHS), na US Maka Ụtụ Service (IRS) na US Immigration and Customs Control Service (ice) n'ihi na ya na-arụ ọrụ. Ọzọkwa afọ ikpeazụ, ụlọ ọrụ na-ahụ mgbe nile kpọtụụrụ onwe òtù, ka ọ pụtara ìhè site quarterly akụkọ na-atụ ọtụtụ kọntaktị na mmekorita nkwekọrịta.
Na otu n'ime ndị ahịa nke Chainalysis bụ US Federal Bureau nke Nchọpụta (FBI), nke ugboro ugboro replenished ụlọ ọrụ akaụntụ na n'oge gara aga afọ ole na ole.
N'ihi nkwado na Chainalysis, ndị FBI jisiri nweta ịrịba arụpụta ikpọ omume nke sonyere nke na-amaghị aha trading saịtị Silk Road, nakwa dị ka ịmụta banyere nkọwa nke odida nke Mt Gox exchange. Ka emechara, na Chainalysis ọrụ esoro efu 650,000 bitcoins, nke ghọrọ mara n'oge ntị na Congress.
Na mgbakwunye, ekele na-arụ ọrụ nke nlekota ụlọ ọrụ, ke mbubreyo November 2017, na US gọọmenti etiti ikpe nyere iwu ka Coinbase mgbanwe inye nzuzo data na 14,000 ọrụ. Mkpebi dị otú ahụ e mere ìhè nke nchoputa site US Maka Ụtụ Service (IRS), nke-enyo enyo na-ọrụ nke mgbanwe na-anata ego si na ire cryptocurrency, ọtụtụ mgbe, pụọ ịtụ ụtụ isi. Ya mere, dị ka IRS data maka 2015, ụtụ uru si arụmọrụ bitcoin ugwo naanị site 802 ndị mmadụ.
The ụlọ ọrụ website na-ekwu na Chainalysis ekwere na cryptocurrency na igbochi technology, na ụlọ ọrụ mgbaru ọsọ bụ inye òtù na ngwaọrụ igbochi wayo eme na nọ nke ego, mgbe n'ihe banyere nri na confidentiality. Otú ọ dị, n'ezie, ụlọ ọrụ blockanalysis ọrụ jikọọ mmadụ ụfọdụ na kpọmkwem azụmahịa na netwọk.
Ya mere, ekele na ọrụ nke Chainalysis, na IRS, ọmụmaatụ, Monitors omume nke ejiri nke bitcoins na ndị ọzọ na cryptocurrencies na Monitors ịtụ ụtụ isi. Na nke a pụtara na azụmahịa na cryptocurrencies, dị ka bitcoin, ike-atụle na-amaghị aha. Ọzọkwa, ụlọ ọrụ ndị na-eji Chainalysis ọrụ na-enweta akụkọ zuru ezu banyere on azụmahịa na ngọngọ, ha nwere ahịa na ndị mmekọ.
Nke bụ eziokwu na ụlọ ọrụ Chainalysis bụ inweta ihe na ọzọ ahịa si n'etiti obodo na-anọchite anya na owuwu, echegbu ọtụtụ ndị kaadị obodo ndị kwere na-eme n'ọdịnihu nke cryptocurrency enweghị obodo ụkpụrụ na nri nke onye ọ bụla na anonymity. Otú ọ dị, dị ka isi nke hermitage Capital enweta ego Bill Browder, n'ihi na omume nke ụlọ ọrụ ndị dị otú ahụ dị ka Chainalysis, cryptocurrencies na-aghọ ihe na-esiwanye mara mma na pụrụ ịtụkwasị obi n'ụzọ nke etinye maka investors.